Ciidankii la wareegay xarunta baarlamaanka Puntland oo dib ugu laabtay xarumahooda ciidan – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidankii la wareegay xarunta baarlamaanka Puntland oo dib ugu laabtay xarumahooda ciidan
Wararka ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya xaaladda magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa sheegaya in xaaladda halkaasi ay tahay mid aad u degan kadib markii ciidamadii gadoodsanaa ee saakay la wareegay xarunta baarlamaanka Puntland ay gelinkii dambe maanta halkaasi isaga baxeen.
Ciidankaas oo la sheegayo in markoodii hore ay ka yimaadeen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ka cabanaayay mushaar la’aan haysata iyo xaqoodda oo aan la siinin.
Dadaal dheeraad ah oo ay sameeyeen Isimadda gobolka Nugaal oo uu ka mid yahay Islaan Ciise Islaan Muuse ayaa waxay ugu dambeyn ku guuleysteen in ciidankaasi ay dib ugu celiyaan xarumihii ay hore ugu sugnaayeen, wixii cabasho ahna halkaasi lagu xalin doonno.
Ciidankaasi ayaa intii ay ku sugnaayeen xarunta baarlamaanka Puntland ee magaalada Garoowe ayaan wax dhibaato ah geysan, marka laga reebo xaruntaasi oo ay isku gadaameen iyo wadooyinka goobtaasi hormarta oo ay muddo saacado ah xireen.
Dhinaca kale, ma jirin cid ka socotay maamulka Puntland oo ciidamadaan la kulantay, inkastoo xilliyadda soo socdo la filaayo in mas’uuliyiinta maamulka ay arrintaan ka hadlaan.
Ma ahan markii u horeeysay ee ay gadood sameeyaan ciidamada Puntland, iyadoona tan iyo markii uu xilka la wareegay madaxweyne Gaas, waxaa joogto noqotay gadoodka ay sameeynayaan ciidamada ka cabanaya mushaar la’aan oo marba la wareegaya xarumo muhiim ah.